ဆောင်းနှောင်းရက် များက အညာမြေ (3 in 1) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Environment » ဆောင်းနှောင်းရက် များက အညာမြေ (3 in 1)
ဆောင်းနှောင်းရက် များက အညာမြေ (3 in 1)
Posted by Mလုလင် on Feb 17, 2013 in Environment, Local Guides, Photography, Travel | 22 comments
3 in 1 Photography Mလုလင် ခရီးသွားမှတ်တမ်း
အချိန်အားလေး ရတာနဲ့ မဖြစ်ဖြစ် အောင်ခရီးထွက် ရတာ ကလဲ ၀ါသနာပါ။ အသွားအများဆုံး နဲ့ အဆက်အကျဆုံးကလဲ မန္တလေး ပါ။ အခုလဲ အညာသူ နဲ့ ရပြီး အညာသား တပိုင်း ပါပဲ . . ဒီရက်ထဲ ဓာတ်ပုံ မရိုက်ဖြစ်လို့ လူက ထုံထိုင်းထိုင်း ဖြစ်နေရာကနေ . . . . အားလပ်ရက် ၂ ရက် ထပ် သွားတာနဲ့ မန်းလေး သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ထုံးစံ အတိုင်းပေါ့ . . ရွာထဲ က စီနီယာ တွေဖြစ်တဲ့ ကိုပေါက် တို့ ရွှေမင်းသား တို့ နဲ့ တွေ့ပြီး ၇ိုက်ကြနှက်ကြ ပေါ့ .. ဗျာ . .
အဲ့ဒါလေး ပါ . . ဓာတ်ပုံ ၉ ပုံလောက် တင်ချင်လို့ပါဗျို့  . . . .
ဦးပေါက် (မန်းလေး) လက်ရာမွန်
ရွှေမင်းသား ရဲ့ လက်ရာမွန်
Mလုလင် ရဲ့ လက်ရာမွန်
ဦးပေါက် (မန်းလေး) ရဲ့ လက်ရာမွန်
ဒီ ရက်ထဲ မှာ post တင်တာ ကြဲ သွားတယ်ဗျာ . . . . ခရီး ထွက်နိုင်လောက်တဲ့ ထိ လဲ မအား . . ဆိုတော့ ပြန်ခါနီး တိုင်း လိုက်ပို့ ပေးပြီး လက်ဖက်ရည် တိုက်တဲ့ ကိုပေ နဲ့ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ဖြစ်ဖို့ အားပေး တဲ့ ရောင်းရင်း မိတ်ဆွေကြီး တွေကို ကျေးဇူး ပါလို့ . . . ..
လေးပေါက်ဆိုရင် ရေနဲ့ တိမ်ပုံ
ရွှေမင်းသားဆိုရင် Rule of Third
အဲဒီလို စပယ်ရှယ်လိုက် လုပ်ထားကြသလိုပဲ။
ကလေးလေး ရေထဲကအကျကတော့ ရှယ်ပဲ။အဲလိုရိုက်တတ်ချင်လိုက်တာ။
အရီးမြင်လို့ကတော့ ကလေးတွေကို naked မရိုက်ရဘူးပြောနေမလားပဲ။
အဟီး . . Naked ဟုတ်ဘူး တီတီ ရဲ့ . . အဲ့ နေရာကို ရေစက် တွေ နဲ့ . . ဖုံး ထားပါရဲ့ . . ခွိခွိ . . . . ပုံ မတင်ခင် ထဲက ကြို သတိ ပေးတဲ့ သူက ပေးပါရဲ့ . . . . . အဲ့ကောင်တွေ အတင်း ၀ိုင်း ပြီး ခုန်ချ နေကြလို့ . တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် ဖိမိ မှာ စိုးလို့ . . လိုချင်တဲ့ ပုံတောင် မ၇ိုက်ခဲ့ရဘူး . .
ဟာ ကျမလည်းတပုံချင်းကြည့်ပြီး အဲဒီလိုပဲပြောမလို့ စိတ်ထဲဝင်လာတာ ကွန်မန့်တွေတွေ့တော့မှ အန်တီပဒုံမာကဦးသွားတယ်။
လူတစ်ယောက် စတိုင်တစ်မျိုးစီ ရှိတယ်။
– လေးပေါက်က နေထွက် နေ၀င် ရိုက်တယ်။
– ရွှေမင်းသားက ၀ိုက် ရိုက်တယ်။
– Mလုလင်က lifestyle ခေါ်မလား၊ လူ့ဘ၀တွေကို ရိုက်တယ်။
လေးပုံမြောက်က လေးပေါက်ရဲ့ နေ၀င် ပုံနဲ့ နောက်ဆုံးက Mလုလင်ရဲ့ အုတ်ဖိုပုံကို ကြိုက်ပါသည်။
အန်တီပဒုံမာကို အားမနာပါးမနာ ဆရာတတ်ရရင်ဖြင့် ရေထဲအကျပုံမျိုးရိုက်ချင်ရင် fast shutter speed သုံးပါ။ Tv mode ပြောင်းပြီး 1/big number (e.g: 1/500 s or 1/1000 s) တို့နဲ့ စမ်းကြည့်ပါ။ ထိန်ထိန်လင်းလင်းရှိတဲ့ နေရာမှာ စစမ်းနော်။ ပြေးနေတဲ့ ခွေးတို့ ၊ ခုန်နေတဲ့ လူတို့ ၊လမ်းပေါ်မှာမောင်းသွားတဲ့ကားတို့ စမ်းရိုက်ကြည့်။
ဒေါ်သကြား . . လဲ ရိုက်ပါဦးနော့ . . . . . လက်ရာတွေ မတွေ့တာ ကြာပြီ . . . မျှော်နေမယ် . . ။
ဒီလိုဆို ချိုချဉ်ကြော်လုံးလုံးနဲ့ အန်တီ စိတ်ချင်းတိုက်ဆိုင်နေတာပေါ့။
အားမနာတမ်း ဆရာတတ်လို့ ရပါတယ် သမီးရေ။
စမ်းဖြစ်အောင် စမ်းပြီး ရင် ပြန် ပြပါဦး . . တီတီ ရေ . . . . ကြည့်ချင်လို့ . . ပါ။
နံပါတ် ၂ ပုံလေးကိုတော့ဖြင့် ကြိုက်သကွယ်………
ဓါတ်ပုံတွေကို ဘယ်သူရိုက်တယ်ဆိုတာမပြောပဲနဲ့ မေးခွန်းမေးမယ်ဆိုရင်တောင် ဘယ်သူ့လက်ရာဆိုတာ ပြောနိုင်လောက်အောင် သိသာသွားပြီ …
ပုံတွေအားလုံးကြိုက်ပါတယ် … အထူးသဖြင့် ရွှေမင်းသားလက်ရာပုံတွေကို ပိုကြိုက်တယ် ..
ဒီနေ့ တော့ ကံကောင်ပြီး ကွန်နက်ရှင်ကောင်းလို့ ပုံတွေကြည့် ခွင့် ရလိုက်ပါတယ်
ပျောက်နေတဲ့  ကိုရွှေမင်းသားလက်ရာလည်းပြန်တွေ့လိုက်ရသလို
ကိုလုလင်ပုံ တွေလည်း ပြန်ကြည့် ခွင့် ရလိုက်ပါတယ်
ခုမှရောပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရဦးမယ် ။ ကျနော်တို့ ပုံလေးတွေအတွက်ပါ ။
ဦးပေါက်ပုံတွေကတော့ လိုင်းကောင်းရင်အမြဲ ကြည့်ပြီး အရသာခံဖြစ်တယ်
ပုံအားလုံး ကောင်းပါတယ်ကွယ် ။
ပျောက်တော်မူ ဆရာကြီးရဲ့ ပုံလာသော ဓာတ်ပုံတွေက တော်တော်လှတာပဲ။ လေးပေါက်တို့ ကိုရွှေမင်းသားတို့ နည်းတူ အမ်လုလင်ကိုလည်း အားပေးနေပါကြောင်း။
သုံးယောက်ပေါင်း ရိုက်ချက်… လန်းလှတဲ့ ပုံတွေချည်းပဲ..
နောက်တစ်ခါ ပဟေဠိပွဲလေး လုပ်ကြအုံးစို့။
ပျောက်ချက်သားကောင်းနေတဲ့ ကလုလင်ကလဲ သရဲထထခြောက်တယ်ထင်ပ
ဥပေါက် ပုံလေးတွေ တော်တော်လှပါတယ် ဗယာကြော် ဗူးသီးကြော်ပါဗျာ
ကျုပ်မလဲ . .၀မ်းရေး အတွက် ရုန်းကန် နေရတော့ . . ဓာတ်ပုံ ရိုက်ဖို့ကို တော်တော် အားထုတ် ရတယ်ဗျာ . . . . . . ကဲ . . ဦးပေါက် ရေ . . လှတယ် တဲ့ . .ပြောကုန်ကြပြီ နော့ . . . . .။
ပုံတွေ လွှတ်ကောင်း၏ ။
ဒါပေသိ ကျုပ်ရိုက်ရင် ဒိထက်ပိုကောင်းမယ် ထင်၏ ။
မနက်နေထွက်၊ ညနေ နေ၀င် ကျုပ်အမူးမပြေသေးတဲ့ အချိန်နဲ့ မူးတူးတူးအချိန်
နေဆို ဟန်းရှိတ်ထ်ကြောင့် ခင်ညားတို့ ၁၀လုံးလောက် မြင်ရမှာ
၀ိုက်ဒ် .. ဟမ်းဟမ်း သိပ်အားထည့်စရာ မလိုဘူး ကျုပ်ကင်မလာ ပြောင်းအထိုင်ကိုက ရွဲ့ပီးစောင်းနေတာ
လိုက်ဖ်စတိုင် … ညှင်းညှင်း
ပျင်းတောင် ပျင်းသေးတယ် ဘယ်သူ့မှ ဆင်ရိုက်စရာ မလိုဘူး … ကျုပ်ပုံ ကျုပ်ပြန်ရိုက်ရင်တောင် လွှတ်လှနေတာ
ဟိုနေ့ကလို ထမ်းထုတ်ရတဲ့ပုံမျိုး ဘယ်မှာ ရနိူင်မတုန်း …
ဆိုတော့ ကြိုးစားကြဇေလိုပါတယ် … :harr:
ငါတွ .. အိုဘဲ့ ကင်မလာမူး
ကလေးအမေက သူ့ ကလေး ဂွေးဖျောက်ပစ်လိုက်လို့ တဲ့
အဲ့ဒါ ခဏ ငှား ဗျာ . .
ခုချိန် ခညားမှ အသုံးမလိုသေးတာ ..
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘဲ တပ်ပေးလိုက်ဘာ့လား .. ဟားဟား
ပုံတွေအားလုံး ရှယ်ပဲဗျို့ ….
ဖေပေါက်ဂျီး ကတော့ …
လူကြီးဆိုတော့ကာ သူ ဝီရိယ ဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်း
ကြွားချင်လို့ ထင်ဘာဒယ် … ဟဲဟဲ …
(နောက်ဒါနော် … ဂယ်မှတ်နဲ့)
နေဝင် နေထွက် ပုံတွေကို ရိုက်နှက်တာ များဒယ် …
ကိုရွှေမင်းသား ကတော့ဖြင့် …
ဘဝ ပုံတွေကို အားသန်တယ် ထင့် …
သစ်ပင်နဲ့ ဘောင်ကွက် ရိုက်တာတွေလည်း တွေ့ရပါ့ …
ကိုလု ကတော့ဗျာ …
ကိုခလေး ဂွေးပျောက် ရိုက်တယ်ဆိုဒေါ့ … ဟဲဟဲ …
တော်ပီ .. နောက်ခါ …
ကိုလု ဒါ့ပုံရိုက်မယ်ဆို ဝေးဝေးက ရှောင်နေမှ … ခွီခွိ ..
အောင်မာ … သူကျတော့ သုံး နေရတဲ့ အတိုင်း . . . ဟိတ်လူ .. Expire ဖြစ်နေပြီ မလားဗျ . . . .